ONLF oo Kordhisay Weerrarada ay ku Qaado Ciidamada Atoobiya – Rasaasa News
Jijiga, Oct 27, 2014 – Dagaalyahanada ONLF waxay weeraro joogta ah ku qaadaan ciidamada Atoobiya, iyada oo ay horay u sheegeen Atoobiya iyo maamulka Kilalku in ay ka adkaadeen ONLF.
Sida ay xaqiijinayaan warbixino la qoray, ONLF waxay kordhisay weerarada ay ku qaadayso fadhiisimada ciidamada Atoobiya ku leeyihiin dhulka Soomaalida Ogadeeniya. Weeraradani waxay hinjinayaan halganka soddon jirsaday ee ONLF ay kula jirto Atoobiya. Weeraradan cusubi waxay xukuumada Atoobiya ku soo kordhiyeen culays siyaasadeed, dhaqaale iyo mid milatariba. Dagaaladani waxayna dhiiri galinayaan in ONLF ay taareero badan ka hesho gudaha dalka iyo dibadaba.
Weerarada ay ONLF qaadayso waxay horseed u yihiin khilaafka soo kala dhexgalay hogaanka sirdoonka Atoobiya iyo qaybta bari ee ciidamada Atoobiya iyo kalsooni daro laga qabo maamulka Kilalka, kuwaas oo dhaliyey in isfahan la,aan ka dhex bilowdo hogaaminta EPRDF.
Dagaalyahanada ONLF, ayaa weeraro joogta ka fuliya dhulka Somalida Ogadeeniya todobaad walba. Kuwaas khasaare u gaysta ciidamada Atoobiya iyo maleeshiyaadka Liyuu Booliska oo joojin la,a weerarada ONLF. Ciidamada Atoobiya iyo maleeshiyada LB ayaa muddo todoba sano (7) ah ku jiray guluf dagaal oo la doonayey in lagu tirtiro dagaalyahanada ONLF, waxaana haatan muuqata in Atoobiya ku guuldaraysatay qorshahaas.
Sida laga soo xigtay xarunta dhexe ONLF, waxaa dib u bilowday hawlgaladii ciidan ee ONLF qaadi jirtay, ka dib kolkii ay hakisay muddo saddex sano ah. Jabhadu waxay dib u habayn ku samaysay baraha hogaaminta talisyada iyo hawlgalka ciidamada ONLF. waxaa kale oo ay Jabhadu dib u habayn ku samaysay saadka iyo isgaadhsiinta xidhiidhinta talisyada iyo hogaaminta Jabhada.
Ciidamada Atoobiya waxay ku kooban yihiin xeryaha ciidamada, maleeshiyada LB waxay ka ag dhaw yihiin tuulooyinka iyo magaalooyinka waawayn dhulka intiisa kalena wuxuu gacanta ugu jiraa ciidamada ONLF, wayna adagtahay in ONLF loogu tago dhulka miyiga ah ee dhashu u taal.
ONLF xidhiidhka caalami ee kaliya ee ay lahayd, wuxuu ahaa dalka Eriteriya oo ay cuna-qabatayn saarantahay lamana oga in ay jiraan dalal kale oo ay ONLF taageero ka heshay xiligan, kaas oo horseedi karta isbadalka muuqda ee ku yimid xarakaadka ONLF.
Jabhada ONLF, waxay baryahan dambe ku hawlanayd xoojinta xidhiidhka caalamiga ah, iyada oo ka qayb gashay kulamo caalami oo ka dhacay Yurub, Asia iyo Afrika. Warbixin Ogadeeniya uu ka qoray urur caalami ah oo taageera dadka aan dawladaha lahayn, wuxuu sheegay Ogadeeniya ay tahay dawlad la,aan [Ogaden Stateless Nations] loona baahan yahay in la siiyo taageero caalami ah.
Bishii September waxay ONLF, daabacday in ka badan 7 weerar oo ay ku qaaday ciidamada Atoobiya, kuwaas oo ay waxyeel naf iyo saanadba ugu gaysatay ciidamada dawlada dhexe iyo maleeshiyada Liyuu Boolis.
Faallo: Horjooga yaashii Soomaray Maamulka Jigjiga ee Ethiopia Maamusho iyo Meelahay ku Kala Danbeeyeen/ C. M. Ahmed.